Kusemthethweni: Ukunqongophala kwe-chip kuchaphazela iApple kwimveliso yeeMacBooks ezithile. | Ndisuka mac
Ukunqongophala kwe-chip kwihlabathi liphela kwakubonakala ngathi kuyinto elungileyo. Kwathiwa zonke iinkampani ezinkulu zinezitokhwe ezaneleyo ukuze zingabinangxaki xa kufikwa ekwenzeni izixhobo zazo. Nangona kunjalo nge Iindaba zeFoxconn kunye nabanye abathengisi, izinto zaqala ukuba nzima. Ngoku kuyaziwa ukuba iApple inokuba nayo ingxaki yokwenza iimodeli zeMacBook.
Okucacileyo kukuba kukho ukuveliswa kweemiconductor zehlabathi kunye nokunqongophala kwesitokhwe ngoku ezichaphazela zonke iintlobo zamashishini. Phantse zonke izixhobo kwezi ntsuku zixhomekeke kwisilicon kwinqanaba elithile. Umzi mveliso weemoto uyabethwa ikakhulu njengoko abavelisi belula abanakuvelisa iimoto ezininzi njengoko bekucwangcisiwe ngelixa kulindwe ukubakho kwecandelo.
Kodwa iinkampani zeenkonzo zetekhnoloji nazo ziqala ukubandezeleka ngenxa yale mbalela. Kwathiwa iApple ayizukuba yenye yezona zichaphazeleka koku kunqongophala kwaye iingxelo ezintsha Batyhola ukuba inkampani yeapile izakuqala ukuba nengxaki yokuvelisa yeemodeli ezithile zeMac. Iimodeli zeMacBook kunye nePad Pro.
Abathengisi beMacBook bazifumana bebambeke kwindawo ephambili yebhotile: inkqubo yokudibanisa izinto kwiibhodi zesekethe. Ezi ngxaki zithethe oko I-Apple inyanzelwe ukuba ilibazise imveliso "yenxalenye yeodolo yecandelo" Kwisiqingatha sesibini sonyaka, ngokwengxelo ekhankanywe apha ngasentla kwaye yalungiswa nguNikkei. Olu xwebhu alutsho ukuba zeziphi iimodeli ze-iPad kunye neMacBook ezichaphazelekayo.
Oku kunokuthetha ukuba iApple kufuneka ikhethe phakathi kwezigqibo ezimbini ezimbi kubasebenzisi bokugqibela. Inkqubo ye- ukulibazisa ukuhanjiswa kwezi zixhobo okanye ukonyusa amaxabiso. Ukuba ukhetha yesibini, eyokuqala iya kuqala kungekudala kwaye ichaphazele kabini. Ukuba ukhetha eyokuqala, kungathatha ixesha ukuba imarike iphinde ibuye, nto leyo abanye abathi izakuba phakathi ku-2022.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Kusemthethweni: Ukunqongophala kwe-chip kuchaphazela iApple kwimveliso yeeMacBooks ezithile.
IMacOS Big Sur 7 beta 11.3 yabaphuhlisi